Sinikezela ngezinsizakalo zethu zokuhlinzeka ngomcimbi ezigabeni ezilandelayo:
Abasizi Booth Info
Abaxhasi Bemicimbi Yezinkampani
Amamodeli Wemicimbi Yezemidlalo
Abaxhasi bomcimbi we-Roadshow
Amathimba Omhlangano Akhumbuzayo
Abasebenzi Bokubhalisa Umcimbi
Abaxhasi Bemicimbi Yomkhankaso
Ngezidingo zakho ngqo, sicela uxhumane nathi Kungakhathalekile ukuthi ngabe yimikhosi noma imicimbi, abasebenzi bamele inkampani yakho.
Indawo yokubukisa ehambisanayo efanelekile nebhizinisi lakho hhayi kuphela eBelgrade, kodwa futhi nekhadi lakho lokuvakashela izivakashi zomhlaba wonke. Sithatha ukuhleleka kokubukeka kwakho okuhle hhayi ezandleni zakho kepha sikweseka ngamandla nangemininingwane emincane kakhulu ngokusebenza kwemibono yakho.
Abasiphethe kanye nabavakashi bethu baqeqeshiwe ngokuqondile futhi banamakhono akhethekile we-PC nezilimi zakwamanye amazwe.
Iqembu lethu liqinisekisa ukuthi ukubukeka kwakho okuhle nemicimbi kuyimpumelelo enkulu.
Kodwa-ke, asilahlekanga umbono wokuthi yini eye yasenza saphumelela: Ukwaneliseka Kwamakhasimende njengento ebaluleke kakhulu, ukunakekelwa komuntu siqu nokuqinisekiswa kwekhwalithi njengengqikithi eyinhloko.
Unomkhiqizo omuhle futhi ufuna ukukhulisa ukubonakala lapho usuthengiswa?
I-AGENCY SNOB ikusiza ekwakhiweni, ekuhlelweni nasekusebenziseni ukukhuthaza ukuthengisa.
Ngoba kulezi zinsuku azisathengiswa zodwa, sibona Ukuphakanyiswa, okuhlose. Izisebenzi zethu zokuphromotha yilesi sizathu ezilungiselelwe ukuqeqeshwa komkhiqizo, ukuqeqeshwa kokuthengisa kanye nokwenza okungcono kakhulu kwemisebenzi.
Umkhankaso wokunyusa ophumelelayo unyusa inani lokuqashelwa lenkampani yakho nemikhiqizo yakho. Ungaba amakhasimende abe ngohlobo lwekheli lakho siqu, amakheli amasha, bese unqobile ukuphathwa.
Ukwethulwa ngempumelelo komkhiqizo wakho kusekelwa kahle iphromoshini entsha futhi kukuqinisekisa ukuthi uyanda ngokwazisa.
Eminyakeni yethu engaphezu kwengu-7 kulo mkhakha, sifunde ukuthi imfihlo yempumelelo yomcimbi ithimba labavakashi nabasizi abaqeqeshiwe, abasebenza ngokubambisana, futhi lapho ukusiza ikhasimende ngokuba semsebenzini wezivakashi zabo ngazo zonke izindlela. Singasho ngokuziqhenya ukuthi sesibonile isidingo ngasinye somgcini wasekhaya / umninikhaya emakethe ekhulayo.
Izinsizakalo zethu ezaziwa kakhulu:
Imicimbi ehlelekile nemikhosi
Singochwepheshe ekubhekaneni nemicimbi esemthethweni: kumakhasimende kahulumeni nawezinkampani, sinabavakashi nabavakashi abakhethekile emikhosini ehlelekile. Ngaphezu kwesethulo nokuziphatha okuhle komcimbi, sigxila kakhulu kwizidingo ezihlukile zomcimbi okukhulunywa kuwo nemithetho yawo yezokuphepha.
Ezingqungqutheleni zabezindaba nemicimbi yezindaba, ozakwethu bazokwamukela ababambiqhaza abafikayo, ngokushesha nangokuphatha ukuphatha ukubhaliswa kwabamele abezindaba, futhi basize nokusebenzisa imakrofoni kuwo wonke umcimbi.
Noma ngabe yingqungquthela yosuku olulodwa noma yezinsuku eziningi, ozakwethu bazobe bekhona kulo lonke leli, kusukela kumalungiselelo kuze kube sekupheleni komcimbi, futhi bakulungele ukusiza kunoma yiziphi izinkinga ezingase ziphakame.
Ukuchazwa Kwasekhaya kanye Nangaphandle
Singasho ngesibindi ukuthi iqembu lethu liphethe elakhe kunoma yimuphi umcimbi, kungaba seHungary noma phesheya. Sabhalisa futhi semukela izivakashi, sisiza amakamelo ezincwadi emahhotela, sinikeze imininingwane ngohlelo lomcimbi, sihambisa imishini yokuhumusha - ngamagama, senza konke ukwanelisa izivakashi nabahleli.
IQINISO LOMhlaba wonke LOKUGCINA
IHORECA EQUIPMENT FAIR
UKULUNGISELELA UKUFUNDA IQINISO
UKUHLAZIYELWA KWAMANDLA KWAMADODA Wazo ZONKE IZINZALO - I-CACIB BELGRADE
INDLELA YOKUZIPHATHA YOKUZIPHATHA, UKUFUNA NOKUXHUMANISA IZITOLO
IMOTOR SHOW (OICA)
UMNYANGO WAMAZWE WAMAZWE WONKE
UMHLANGANO WAMAZWE NGAMANDLA - I-FAOPLANT FAIR
UKUVUNYELWA KWAMAZWE NGOKWEZWE NOKWENZIWA KWAMAKHONO, IZINYANGO, IZIMPILO NEZEMPILO
UKWAKHIWA KWEZOBUCHWEPHESHE KWAMAZWE WONKE
ISIQINISO SEZWE SAMI SOKUFUNDA NOKUFUNDA KWEZOBUCHWEPHESHE (UFI)
BONKE ISIBONAKALISO SOKUHLELA IBELGRADE
I-PackTECH EXPO BALKAN
INDAWO YOKUZIPHATHA EMHLABENI, IPHEPHA KANYE NENKOLO EQINILE YOKUKHANYA - GRAFIMA
I-FAIR YOKUFINYELELA KWEZOZWE NGEMPAHLA NAMAHHALA - BIROEXPO
UKWANDA KOKUQINISEKISA NOKUGCINA
I-FAIR YAMANDLA WOKUPHAKATHI KWAMAZWE
UKUVIKELA UMHLANGANO WOKUVIKELWA KWAMANDLA NGOKWEZWE KANYE NENZALO YOKUFUNDA KWEMPAHLA - ECOFAIR
IQINISO LOMHLANGANO WAMAZWE NGAMANDLA
I-INTERNATIONAL BELGRADE BOOK FAIR
IQINISO LAMABHODI WOKUFUNDA KWAMANDLA NOKUFUNDA
I-BIR FAIR - IMFUZO YEMFUNDO
IQINISO LOKWAZISA, UKUXHUMANA NOKUFUNDA
IQINISO LAMAZWE LOKUQINISEKISA, UKUFUNA KANYE NESINQUMO SOKUTHENGA (UFI)
ISIBONELELO SAMAMATINESESI, IZITOLO NEMIKHAKHA YOKWENZA UMkhiqizo WOKWENZA INDAWO YOKUKHANYA (UFI)
IQINISO LOKUDLA KWE-ETHNIC KANYE NAMANZI